Inta Badan Haweenka Iyagoo Gabar Ah Dhaafa Da’ada 24-Ka Sano Si Sax Ah Looma Bikro Jabiyo (Daraasad) - iftineducation.com
iftineducation.com – Inta badan haweenka ayaa la ogaaday iney wacan tahay in yaraanta lagu bikro jabiyo sida ay sheegtay World Street Journal oo soo qaadatay sahan uu qaabeeyay mahadka hormaanka aadanaha.
Da’adda ugu wacan in lagu bikro jabiyo gabdhaha ayaa la ogaaday iney tahay da’ada 17-ka sano, kama hadlaayo xiliga ay tahay in la guursado ayuu yiri ninka sheekadan qoray.
Inta aaney gaarin 17 sano ,waxaa aad u yar xubnaha xiriirka laleh bikrada laakiin waxaa si toos ah loo ogaaday in mar walba xubnahaas ay sii koraan markii ay da’adu korto.
Hadii ay gabadhu dhaafto da’ada 24 sano waxaa la sheegay in aan si sax ah loo bikro jabin inta badan inkastoo raga qaba ay la tahay iney bikro jabsan tahay xaaskiisu.
Faris Paul oo ah qabiir xaga hormaanka ah waxaa uu sheegay in gabadhaha 24ka sano ka weyn aan si sax ah loo bikro jabin balse xoogaa fiican ay furtanto bikrada gudaha.
Waxaa uu sheegay intaas ay dhib ku keento xaga dhalmada ,sidoo kale haweenka bikrada ku gaara 24 jirka ma qaataan raaxadii ay xaqa u laahayeen inkastoo aysan iyagu badi dareemin iney wax ka maqan yihiin.